Yohane 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Cubeo Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guahibo Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Inga Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Rapa Nui Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Yohane Kyerɛwtohɔ 18:1-40
Yuda yii Yesu mae (1-9)
Petro de sekan twaa obi aso (10, 11)
Wɔde Yesu kɔɔ Anas hɔ (12-14)
Bere a edi kan a Petro kae sɛ onnim Yesu (15-18)
Wɔde Yesu kogyinaa Anas anim (19-24)
Bere a ɛto so abien ne bere a ɛto so abiɛsa a Petro kae sɛ onnim Yesu (25-27)
Wɔde Yesu kogyinaa Pilato anim (28-40)
“M’Ahenni mfi wiase” (36)
18 Bere a Yesu kaa eyinom wiei no, ɔne n’asuafo no pue kotwaa Kidron Bon+ no, na wɔkɔɔ baabi a turo bi wɔ. Na ɔne n’asuafo no kɔɔ turo no mu.+ 2 Ná Yuda a ɔrebeyi no ama no nso nim hɔ, efisɛ na Yesu ne n’asuafo no taa kohyia hɔ. 3 Enti Yuda de asraafodɔm ne awɛmfo a wofi asɔfo mpanyin ne Farisifo no nkyɛn baa hɔ, na na wokurakura agyatɛn* ne akanea ne akode.+ 4 Ná Yesu nim nea ɛrebɛto no nyinaa. Enti obegyinaa anim, na obisaa wɔn sɛ: “Hena na morehwehwɛ no?” 5 Wobuaa no sɛ: “Nasaretni+ Yesu.” Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mini.” Saa bere no, na Yuda a ɔrebeyi no ama no ne wɔn na egyina hɔ.+ 6 Bere a Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, “Mini” no, wopinii wɔn akyi, na wɔhwehwee ase.+ 7 Enti obisaa wɔn bio sɛ: “Hena na morehwehwɛ no?” Ɛnna wɔkae sɛ: “Nasaretni Yesu.” 8 Yesu buae sɛ: “Maka akyerɛ mo sɛ mini. Enti sɛ me na morehwehwɛ me a, ɛnde momma mmarima yi nkɔ.” 9 Eyi maa asɛm a ɔkae no baa mu sɛ: “Wɔn a wode wɔn ama me no, memmaa wɔn mu baako mpo nyerae.”+ 10 Ɛnna Simon Petro a na sekan hyɛ ne ho no twee, na ɔde twaa ɔsɔfo panyin no akoa aso nifa fii hɔ.+ Ná akoa no din de Malko. 11 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ Petro sɛ: “Fa sekan no hyɛ ne bɔha* mu.+ Kuruwa a Agya no de ama me no, ɛnsɛ sɛ menom anaa?”+ 12 Afei asraafo no ne ɔsahene no ne Yudafo awɛmfo no kyeree Yesu, na wɔkyekyeree no. 13 Wodii kan de no kɔɔ Anas hɔ, efisɛ na n’ase ne Kaiafa+ a ɔyɛ ɔsɔfo panyin saa afe no.+ 14 Nokwasɛm ne sɛ, ɛyɛ Kaiafa na otuu Yudafo no fo sɛ, eye ma wɔn sɛ onipa baako bewu ama ɔman no.+ 15 Saa bere no, na Simon Petro ne osuani foforo di Yesu akyi.+ Ná ɔsɔfo panyin no nim saa osuani no, na osuani no ne Yesu kɔɔ ɔsɔfo panyin no adiwo hɔ. 16 Petro de, na ogyina abɔnten pon no akyi.* Enti osuani a na ɔsɔfo panyin no nim no no puei, na ɔne nea ɔhwɛ ɔpon no ano no kɔkasae, na ɔde Petro baa mu. 17 Na abaawa a ɔhwɛ ɔpon no ano no bisaa Petro sɛ: “Wo nso, sɛ́ woka ɔbarima yi asuafo no ho? Anaa?” Ɔkae sɛ: “Daabi, menka ho.”+ 18 Saa bere no, na awɔw wom. Ɛno nti, na nkoa ne awɛmfo no de gyabiriw asɔ ogya gyinagyina ho reto. Ná Petro nso gyina wɔn nkyɛn reto ogya no bi. 19 Ɛnna ɔsɔfo panyin no bisaa Yesu asɛm faa n’asuafo ne ne nkyerɛkyerɛ ho. 20 Yesu buaa no sɛ: “Mekasa kyerɛɛ wiase no wɔ baguam. Mekyerɛkyerɛe daa wɔ hyiadan mu ne asɔrefi,+ baabi a Yudafo nyinaa hyia, na manka biribiara wɔ kokoam. 21 Adɛn nti na worebisa me? Bisa wɔn a wɔtee nea meka kyerɛɛ wɔn no. Hwɛ! Eyinom nim nea mekae.” 22 Bere a ɔkaa saa no, awɛmfo no mu baako a na ogyina hɔ no bɔɔ Yesu asom+ kae sɛ: “Saa na ɛsɛ sɛ wubua ɔsɔfo panyin?” 23 Yesu buaa no sɛ: “Sɛ manka no yiye a, kyerɛ me nea mekae a manka no yiye; na sɛ mekaa no yiye a, adɛn nti na wobɔɔ me?” 24 Afei Anas ma wɔkyekyeree no de no kɔmaa ɔsɔfo panyin Kaiafa.+ 25 Saa bere no, na Simon Petro gyina hɔ reto gya. Ɛnna wobisaa no sɛ: “Wo nso, sɛ́ woka n’asuafo no ho? Anaa?” Wannye antom, na ɔkae sɛ: “Daabi, menka ho.”+ 26 Ɛnna ɔsɔfo panyin no akoa baako, nea Petro twaa n’aso no busuani,+ kae sɛ: “Mihui sɛ woka ne ho wɔ turom hɔ, meboa?” 27 Nanso Petro kae bio sɛ ɛnte saa, na ɛhɔ ara na akokɔ bɔnee.+ 28 Afei wodii Yesu anim fii Kaiafa hɔ kɔɔ amrado no fi.+ Saa bere no, na ɛyɛ anɔpatutuutu. Wɔn ankasa de, wɔanwura amrado no fi hɔ, efisɛ na wɔmpɛ sɛ wɔn ho gu fĩ,+ sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi adi Twam no bi. 29 Ɛnna Pilato pue baa wɔn nkyɛn, na obisae sɛ: “Sobo bɛn na mode bɔ ɔbarima yi?” 30 Wobuaa no sɛ: “Sɛ ɔbarima yi nyɛ ɔbɔnefo a, anka yɛamfa no ammrɛ wo.” 31 Ɛnna Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ara momfa no nkɔ nkobu no atɛn sɛnea mo mmara te.”+ Na Yudafo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Mmara mma kwan sɛ yekum obiara.”+ 32 Ná eyi bɛma Yesu asɛm a ɔka de kyerɛɛ owu ko a na ɔrebewu no aba mu.+ 33 Enti Pilato san wuraa amrado no fi hɔ, na ɔfrɛɛ Yesu bisaa no sɛ: “Wone Yudafo Hene no anaa?”+ 34 Yesu buae sɛ: “Wo ara na woabɔ wo tirim reka eyi, anaa nkurɔfo na aka me ho asɛm akyerɛ wo?” 35 Pilato buae sɛ: “Wohwɛ a meyɛ Yudani? Wo ara wo manfo ne asɔfo mpanyin no na wɔde wo brɛɛ me. Ɛdɛn na woyɛe?” 36 Yesu buae sɛ:+ “M’Ahenni mfi wiase.+ Sɛ m’Ahenni fi wiase a, anka m’asomfo bɛko na wɔamfa me amma Yudafo no.+ Nanso m’Ahenni mfi ha.” 37 Ɛnna Pilato bisaa no sɛ: “Enti woyɛ ɔhene anaa?” Yesu buae sɛ: “Wo ara na woreka sɛ meyɛ ɔhene.+ Eyi nti na wɔwoo me, na eyi nti na mebaa wiase, sɛ merebedi nokware no ho adanse.+ Obiara a ɔwɔ nokware no afã no tie me nne.” 38 Pilato bisaa no sɛ: “Dɛn ne nokware?” Bere a ɔkaa eyi no, ɔsan pue kɔɔ Yudafo no hɔ, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Minhu mfomso biara wɔ ne ho.+ 39 Bio nso, mowɔ amanne bi sɛ edu Twam a,+ migyaa onipa baako ma mo. Enti mopɛ sɛ migyaa Yudafo Hene no ma mo anaa?” 40 Wɔteɛɛm bio kae sɛ: “Nnyaa ɔbarima yi, gyaa Baraba mmom!” Ná saa Baraba yi yɛ ɔkorɔmfo werɛmfo.+
^ Ɛyɛ popã a wɔapaapae akyekyere abom asɔ ano gya.
^ Ɛyɛ biribi a wɔde sekan hyɛ mu. Aboa nhoma na wɔtaa de yɛ.
^ Anaa “ano.”